Xilliga iyo goobta lagu aasayo AUN Guddoomiye Eng Yariisow oo la shaaciyay |
Xilliga iyo goobta lagu aasayo AUN Guddoomiye Eng Yariisow oo la shaaciyay
Muqdisho (NogobNews) 02/08/2019
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in aas qaran loo sameyn doono Allaha u naxaristo guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa caasimadda Muqdisho, Marxuun Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo shalay ku geeriyooday magaalada Doxa ee dalka Qatar.
Muddo saddex maalin ah ayaa dalka oo dhan uu galay baroor-diiq iyada oo calanka hoos loo dhigay, waxaana dowladda Soomaaliya ay guddi u saartay aaska qaran ee marxuun Cabdiraxmaan Yariisow oo ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay 24ka bishan xarunta dowladda hoose ee Xamar.
“Meydka guddoomiyaha diyaar gaar ah ayaa ka qaadeysa maalinta Sabtida magaalada Doxa, anniga iyo qoyska oo kooban 13 qof ayaa raaci doona, madaxda qaranka waxay ii sheegeen isla Sabtida in la aasi doono.” ayuu yiri safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar, Cabdirisaaq Faarax Cali (Taano).
Madaxda sare ee dowladda oo uu ugu horreeyo madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida allaha u naxatisto marxuun Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo siyaasadda dalka muddo dheer ku soo jiray xilal kala duwana soo qabtay.